[email protected] + ၉၅ ၁ ၂၂၆၁၈၀ , ၂၁၁၀၁၁
Home - Technical Service
ဝယ်သူစိတ်ကြိုက်သီးသန့်ထုတ်ကုန်များ - ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း
ဦးကြူမိသားစုတွင် မည်သည့်မုန့်လုပ်ငန်း ပြဿနာမျိုးအတွက်မဆို လျော်ညီမှန်ကန်သော အဖြေတခုရှိစမြဲဖြစ်ပါသည်။ မုန့်ဖုတ်ပညာရှင်တိုင်းသည် များပြားလှသောဂျုံမှုန့်အမျိုးအစားများ အနက်မှ ၄င်းတို့လိုချင်သည့်အမျိုးအစားရသည်အထိ အတိအကျရှာဖွေနိုင်ကြပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ မုန့်တိုက်များတွင် လိုအပ်နေသည့် သင့်တင့်သောအဖြေတခုအား တစ်ဦးချင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ မိမိတို့၏ မုန့်ဖုတ်ပညာရှင်များသည်လည်း လူကြီးမင်းတို့ မုန့်စမ်းသပ်သည့်ကာလအတွင်း ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရန်အတွက် အမြဲအသင့်ရှိနေကြပါသည်။
မိမိတို့၏ မုန့်ဖုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် လူကြီးမင်းတို့၏ မုန့်တိုက်များသို့ မုန့်နှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လုပ်ကိုင် ဝေမျှပေးလျှက်ရှိပါသည်။ တဆက်တည်းမှာပင် အကောင်းမွန်ဆုံးနှင့် အရသာအပြည့်စုံဆုံး မုန့်ရလဒ်များ ရရှိရန်အတွက်လည်း လုပ်ငန်းခွင်၌ လေ့ကျင့်ပြသပေးနိုင်ပါသည်။
မိမိတို့မှ သိပ္ပံနည်းကျသောချည်းကပ်မှုများဖြင့် ခေတ်နှင့်အညီ မုန့်ဖုတ်သင်ခန်းစာများ သင်ကြားရန်အတွက် မုန့်ပညာသင်တန်းကျောင်းကိုလည်း တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ မုန့်ဖုတ်ခြင်းအတွက် အသစ်စတင်သင်ယူလိုသူများဖြစ်စေ၊ မိမိ၏အရည်အသွေးပိုမိုတက်လိုသောမုန့်ပညာရှင်များဖြစ်စေ၊ မိမိတို့၏ အရည်အသွေးပြည့်သင်ကြားရေးဆရာများမှ ပြသပေးရန်အသင့်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် လူအနည်းစုသင်တန်းဖြစ်သည့်အလျောက် တစ်ဦးချင်းအနီးကပ်ပြသပေးနိုင်ပေးရန်အတွက် သင်ကြားရေးဆရာများမှလည်း လူကြီးမင်းတို့နှင့်အတူတကွ ပြုလုပ်နိုင်ရန် မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားပါက [email protected] သို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
No. 17/19 Hledan Street,
Telephone: +951- 226108, 211011 FAX: +951- 226047, 227423 E-mail: [email protected] Website: www.ukyufamily.com
- တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် - အသက်(၂၀မှ ၃၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level (2) ...
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ၊ အသက် (၂၀-၂၅) ကြား၊ IT ဆိုင်လုပ်ငန်းများတွင် Sales & Marketing အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်၊ ...
Copyright © 2015 U Kyu Family . Powered by World Wide Myanmar